Niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Ad Recovery | Martech Zone
Otu n’ime nsogbu kasịnụ maka ndị na - ebipụta akwụkwọ na ahịa ọ bụla taa bụ ndị na - egbochi ndị mgbasa ozi. Maka ndị na-ere ahịa, ọnụọgụ mgbasa ozi na-ebili na-eme ka enweghi ike iru ndị na-ege ntị na-achọsi ike. Tụkwasị na nke a, ọnụego mgbasa ozi dị elu na-eduga n'obere ngwa ahịa ad, nke nwere ike mechaa mụbaa ọnụego CPM.
Ebe ọ bụ na ndị na - egbochi mgbasa ozi bidoro rụọ ọrụ ihe karịrị afọ iri gara aga, ọnụego adbloro arịgoro elu, na - enweta ọtụtụ nde ndị ọrụ ma gbasaa ọ bụla n'elu ikpo okwu.
Otu n’ime nchọpụta ọhụrụ ndị otu nyocha anyị mere na N'elu bụ na ọnụọgụ mgbasa ozi ugbu a na US bụ 33.1%. Nke a pụtara na 3 n’ime ndị ọrụ 10 anaghị ekpughere mbọ ịre ahịa. N'ụzọ doro anya, ọ bụ okwu dị mkpa maka ụwa ahịa, yana n'usoro maka mbipụta ụwa, nke dabere na mgbasa ozi maka ịdị adị ya.
Kedụ ka aga - esi mee nke a?
Ruo ugbu a, enwere ọtụtụ ụzọ na-anwa ịmepe ihe adblocking ahụ. Publishersfọdụ ndị nkwusa na-anwa ịgbanwe ụdị azụmaahịa ha ma jiri akara akwụ ụgwọ na-ana ndị ọrụ ụgwọ maka ịnweta saịtị ha. Ndị ọzọ, na-ahọrọ ịmanye ndị ọrụ ha ịdebanye aha na weebụsaịtị ha site na ntọala mgbasa ozi iji nweta ọdịnaya saịtị ahụ. Isi ọdịda nke atụmatụ abụọ a bụ ọgbaghara ha na ihe ọghọm nke ndị ọrụ ahụ ga-eme hapụ saịtị ahụ kpamkpam.
Nke a bụ ebe ụzọ ọzọ si abata - ad recovery.
Mgbake mgbasa ozi na-enye ndị mbipụta ohere ịtinyeghachi mgbasa ozi nke ndị na-egbochi mgbasa ozi wepụrụ na mbụ. Usoro a nwere uru dị iche iche karịa ngwugwu ndị ọzọ. Uru doro anya bụ inwe ike ịnye mgbasa ozi maka adblocking na ndị na-abụghị adblocking. Ndị mbipụta ga-enwe ike ịgbasa ngwa ahịa ad ha, ndị ọrụ nkewa ma lekwasị anya na mkpọsa akpọrọ ad mgbasa ozi na ndị na-abụghị ndị na-egbochi ad.
N'adịghị ka ihe a ga-atụ anya ya, ndị ọrụ adblocking na-egosipụta ọnụọgụ dị elu, oge ụfọdụ dị elu karịa ndị ọrụ na-adịghị adblocking.
Kedu ụdị azịza mgbasa ozi dị iche iche?
E nwere ọtụtụ ihe ngwọta na ahịa taa. Mgbe ị na-enyocha ndị dị iche iche, e kwesịrị iburu ụfọdụ akụkụ dị mkpa n'uche. Nke mbu bu ntinye - ngosiputa ngbaputa nghari enwere ike mejuputa ma obu ihe nkesa, CDN (Content Delivery Network) ma obu ndi ahia. Ihe njikọ ihe nkesa na CDN dị mgbagwoju anya ma dị oke egwu, na-achọkarị mgbanwe ndị dị mkpa n'akụkụ ndị mbipụta tinyere ọrụ mgbasa ozi ha.
Imirikiti ndị nwe saịtị na-atụ egwu njikọ dị otú ahụ, nke bụ nnukwu ihe mgbochi, ọ ga-ahọrọkarị ịghara iwezigharị azịza ma ọlị. N'aka nke ọzọ, imirikiti njikọ ndị ahịa ka amachibidoro ma ndị na-egbochi mgbasa ozi nwere ike ịgbagide ya.
Ihe ọzọ dị iche iche dị iche iche dị iche iche na mgbasa ozi mgbake bụ ha zuru ezu. Nke a gụnyere nyiwe ha na-arụ ọrụ na ya, na mgbasa ozi ha nwere ike ịgbake.
Ọzọkwa, mgbe ndị nkwusa chọrọ iwepụta ụdị mgbasa ozi niile, gụnyere mgbasa ozi static, mgbasa ozi vidiyo, na mgbasa ozi ala, ụfọdụ usoro mgbake mgbasa ozi nwere ike weghachite naanị otu ụdị mgbasa ozi.
Gini bu osisa Onit?
Onit na-enye usoro ikpo okwu mgbasa ozi kachasị agbakwunyere, nwere ike iweghachi ihe ntinye mgbasa ozi niile nke ndị na-egbochi mgbasa ozi wepụrụ, na igwe nchọgharị na desktọọpụ. N'elu weghachite ngosipụta, vidiyo na mgbasa ozi mgbasa ozi ala, yana nsuso pikselụ zuru ezu, ịchọta kuki, na nkwado nke ndị ọrụ.
Ihe ngwọta anyị dabere na ngwa ngwa, njikọ ndị ahịa, na-enye ohere maka njikọta na-enweghị ntụpọ nke na-achọghị mgbanwe na sava mgbasa ozi nke ndị ahịa anyị ma ọ bụ arụmọrụ mgbasa ozi.
Ebumnuche nke Onit bụ iji mee ka ndị nwe saịtị ahụ nwee ike ịkwado ụdị azụmaahịa ha, ma na-achọkwa ahụmịhe ndị ọrụ. Anyị na-arụ ọrụ na nnabata ndị Njikọ maka ntuziaka Mgbasa Ozi Ka Mma, nke anyị chere na ọ bụ etiti dị n'etiti ma ndị nkwusa ma ndị ọrụ.
Iji N'elu, onye nkwusa nwere ike ijikwa mgbasa ozi enyere yana ebe etinye ya, ma hụ na ndị a bụ naanị ndị dị elu na ndị anaghị egbochi. Na mgbakwunye, azịza anyị na-enye aka na ahụmịhe onye ọrụ ka mma, site na ịme ka oge na-ebuwanye peeji ma belata oriri bandwidth.
Kedu ka ọrụ Onit si arụ?
Nsonaazụ nsonaazụ bụ na egosiputara mgbasa ozi na onye ọrụ adblocking, n'agbanyeghị agbanyeghị mgbasa ozi mgbasa ozi.
Mee elu na ntinye mgbasa ozi, bawanye na njikọ aka
Mgbe ad igbochi ọnụego maka Mako, Israel portal portal, ruru 33% wee merụọ ọrụ ha dabere na mgbasa ozi nke ukwuu, ha malitere ịchọ ngwọta. Dị ka Uri Rozen, Onye isi ụlọ ọrụ Mako kwuru, Marka bụ naanị ihe ngwọta nke mere ka ha nwee ike ịzụ ahịa azụmahịa ha na-enweghị nsogbu ọ bụla. Site n'iji ihe ngwọta nke Onit, Mako enweela ike ịnye mgbasa ozi mgbasa ozi nye ndị ọrụ na-ebido ebe ọ bụ na June 2016, na nso nso a, malitere ịmalite mgbasa ozi vidiyo na ngalaba isiokwu yana na ọrụ VOD ha buru ibu. Onit's Onit na Mako gosipụtara ngosipụta mgbasa ozi butere mmụba dị ukwuu nke 32% -39% n'etiti Jenụwarị na Mee nke 2017.
Dabere na Rozen, ndị ọrụ adblocking gosipụtara ụdị njikọ ahụ ma ọ bụ ọbụna dị elu karịa na njigide njide karịa ndị ọrụ na-abụghị ndị na-adblocking, yana oge oge nnọkọ na-eto site na 3.2%.
Mako bụ naanị otu ihe atụ nke ọtụtụ ndị anyị nwere obi ụtọ.
Choputa ihe ndi ozo
Tags: ad igbochi mgbakeMgbakead mgbake ngwọtaad-igbochimgbasa ozimmekorita maka ntuziaka mgbasa ozi ka mmaIsraelizun'elu
Gal Glikman bụ onye isi na ngalaba-guzobere N'elu, ad mgbake ngwọta maka adịchaghị nkwusa. Tupu ịmalite ntọala Onit, Gal jere ozi na ngalaba ọgụgụ isi na Israel Defense Forces dị ka onye isi, onye nrụpụta & onye nyocha nchekwa maka afọ 4.5.
Otu Julius Si Na-abawanye ROI nke Ahịa Mgbanye
Niile nkọwa ị chọrọ ogo na obodo SEO Marketing